Kenya oo ka jawaabtay carada Villa Somalia ay ka qaaday socdaalka Kenyatta ee Dhoobley - Caasimada Online
Home Warar Kenya oo ka jawaabtay carada Villa Somalia ay ka qaaday socdaalka Kenyatta...
Kenya oo ka jawaabtay carada Villa Somalia ay ka qaaday socdaalka Kenyatta ee Dhoobley
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyadoo maalinimadii shalay Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu booqasho kusoo gaaray Somalia, gaar ahaan Degmadda Dhoobley ee Gobalka J/Hoose, ayaa waxaa arrintaasi ka hadashay Madaxtooyada Kenya.
Monoah Esipsu oo ah Afhayeenka Madaxtooyada Kenya, ayaa sheegay in booqashada Kenyatta ee Dhoobley aysan micno kusoo kordhineynin Siyaasada Kenya kala dhexeysa Somalia.
Monoah Esipsu, waxa uu sheegay in Booqashada Kenyatta aysan marnaba dhaawici doonin xiriirka labada dal waxa uuna arrin caadi ah ku sheegay tagitaankiisa Dhoobley.
Monoah Esipsu, ayaa beeniyey inay Xiisad Diplomaasiyadeed u dhexeyso Dowladaha Somalia iyo Kenya, kadib booqashaddii uu Madaxweyne Uhuru Kenyatta shaly ku soo booqdy Saldhigga Ciiddanka Kenya ku leeyihiin Degmadda Dhoobley ee Gobalka J/Hoose.
Monoah Esipsu, oo maanta Shir Jaraa’id ku qabtay magaalladda Nairobi ayaa tilmaamay inuu socdaalkaasi caadi ahaa, inkastoo ay Dowladda Somalia ka carootay arrintaasi.
Sidoo kale, Mr Manoah Esipisu waxa uu beeniyey inuu Dagaal Diplomaasiyadeed kala dhexeeyo Somalia, waxa uuna meesha ka saaray in carada Madaxtooyada Somalia ay tahay mid sii taagnaan karto maadaama booqashada Kenyatta ay aheyd mid gaaban.
Isagoo arrintaani ka hadlaayay ayuu yiri ”Booqashadda Madaxweynaha ee Ciiddankiisa waa wax caadi ah in l sameeeyo, Annagana saas ayaan samaynay. waxay u ahayd muhiim Madaxweynaha si u uTaageeradiisa u tusiyo Ciiddnkiisa ee ka shaqeynayo sugidda Ammanka ee dlkeenn”
Socdaalkiisa ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid uu uu taageero ugu muujiyo Ciiddankiisa oo ku sugnaa Somalia tan iyo bishii October ee sannadkii 2011-kii.
Dhinaca kale, Dowlada Somalia ayaa aad uga carootay wargalin la’aanta socdaalka Uhurro Kenyatta.